Ampidino Microsoft Excel Viewer ho an'ny Windows
Ampidino Microsoft Excel Viewer
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (51.10 MB)
Ampidino Microsoft Excel Viewer,
Microsoft Excel Viewer dia programa hanokafana rakitra Excel ofisialy novolavolaini Microsoft, ahafahanao mijery ireo boky fiasana Excel na dia tsy manana programa Microsoft Office Excel napetraka ao aminny rafitranao aza ianao.
Mampalahelo fa tsy afaka mamorona antontan-taratasy miasa Excel vaovao ianao, manitsy antontan-taratasy efa misy ary mitahiry ny asanao aminny alàlanny programa, izay ahafahanao manonta sy mandika izay boky fiasana Excel, ankoatry ny fijerena ireo rakitra Excel.
Ny programa dia mamela anao hanokatra, hanao pirinty ary handika ireo boky fiomanana efa nomanina miaraka aminny Office 2003 sy ny kinova Excel rehetra teo aloha.
Raha mitady programa maimaimpoana ianao hijerena ireo rakitra Excel, dia manoro hevitra anao aho hanandrana ny rindrambaiko ofisialy Microsoft Excel Viewer avy amini Microsoft.
Haben'ny rakitra: 51.10 MB